Na Fedora ha na-eme atụmatụ ịme nkewa ma nyegharịa ya Fedora Linux | Site na Linux
Na Fedora ha na-eme atụmatụ ime nkewa ma nyegharịa ya Fedora Linux
O doro anya na lNdị mmepe nke nkesa Fedora enyela ọtụtụ ihe gbasara kemgbe ọkara afọ ikpeazụ nke afọ gara aga na kwa ọnwa atọ agbaala afọ a ma ọ bụghị iji obere mgbalị ha gosipụtara ebe ọ bụ na ewepụtara ọtụtụ mgbanwe dị mkpa maka nkesa Linux a na-ewu ewu.
Na nke ugbu a ọ bụ sokwa Ọ dị mma, ihe dị mkpa ga-eme n'ime Fedora ma ọ bụ onye ndu oru ngo ahu n’onwe ya (Matthew Miller) onye kwuwaputa na o buru ụzọ kewaa obodo Fedora na aha nkesa.
Echere m n'ime mgbanwe ahụ nke Matthew Miller kwuru a na-atụgharị uche na kwuru nkewa n'aka nke ọzọ, aha "Fedora" bụ naanị metụtara ọrụ dum na ndị metụtara metụtara, mgbe banyere nkesa a na-ezube ka a kpọọ ya Fedora Linux.
Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị nwere ike ọ gaghị anọchite nnukwu ihe ma maka akụkụ ọzọ nke obodo mmegharị a anaghị amasị ha (olile anya na nke a anaghị ebute bifurcation n'ihi ụfọdụ afọ ojuju dị ka o mere na nkesa ndị ọzọ), mana Mgbanwe a na-eche echiche iji mee nkewa n'ihe metụtara ihe emere na ihe metụtara.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ihe kpatara mgbanwe a site aha ya kwuru na oru ngo Fedora ejedebeghị na otu nkesa ma na-emepekwa ebe nchekwa EPEL maka RHEL / CentOS, akwụkwọ, weebụsaịtị na ngwaọrụ dị iche iche. Ya mere, mgbe m kwuru Fedora, ọ ga-amasị m ịzo aka na ọrụ ahụ dum ọ bụghị otu n'ime ngwaahịa ndị emere.
N'ime ya ọ kwuputara nke onye ndu Fedora mere A na-ekwu na mgbanwe aha a rịọrọ maka Fedora mbipute 35 ebe ọ ga-anọchi oke 'NAME = Fedora' na faịlụ / wdg / os-ntọhapụ na 'NAME = »Fedora Linux»'.
Mgbe m na-ekwu maka Fedora Project, m na-ekwu na ị: obodo. Nkesa Linux anyị mere dị mma, mana obodo bụ isi. Mgbe ndị mmadụ na-ekwu "Fedora" na-enweghị ihe ruru eru, ọ ga-amasị m ka ha chee maka "Project Fedora", ọ bụghị obere ibe anyị na-emepụta. Na mgbakwunye, anyị mepụtara ihe karịrị otu ihe: EPEL, dịka ọmụmaatụ, na mgbakwunye na ọrụ nka, akwụkwọ, ebe nrụọrụ weebụ na ngwaọrụ ndị anaghị agbakwunye na sistemụ arụmọrụ n'onwe ya.
Kemgbe ọtụtụ afọ, anyị arụbeghị nnukwu ọrụ iji gosipụta ọdịiche a. Ugbu a, ka anyị jiri nwayọ na-asụ asụsụ anyị.
N’oge na-adịbeghị anya, ajụrụ m ndị nchịkọta akụkọ nke Fedora magazine ka ha bido iji “Fedora Linux” n ’ebe anyị na-arụtụ aka na sistemụ arụmọrụ. Dịka ọmụmaatụ: "Iji mycoolpackage na Fedora Linux" kama "Iji mycoolpackage na Fedora". Onye njikwa ihe omume Fedora emelitere usoro iheomume yana ndebiri usoro iji jiri "Fedora Linux" mee ihe mgbe o kwesiri.
Ihe ntinye "ID = fedora" ga-anọgide na-agbanweghi agbanwe, ya bụ, ọ dịghị mkpa ịgbanwe ihe ederede na ndokwa ọnọdụ na faịlụ nkọwapụta.
N'akụkụ mbipụta pụrụ iche, ndị a ga-aga n'ihu na-ekesa n'okpuru aha ochie, dị ka Fedora Workstation, Fedora CoreOS na Fedora KDE Plasma Desktop.
Kedu maka mbipụta na ụdị ndị ọzọ? Nọgide na-eji "Fedora Dị ka anyị na-eme. Iji maa atụ: "Fedora Workstation", ọbụghị "Fedora Linux Workstation".
Echiche nke ịkọwapụta Fedora GNU + Linux karịa Fedora Linux anataghị nkwado, ebe okwu na-enweghị isi na-eme ka o sie ike nghọta yana n'agbanyeghị na ihe ndị mejupụtara GNU bụ njikọ dị mkpa na Fedora Linux, nkesa abụghị naanị ha ma tinyekwa ọtụtụ nchịkọta ndị ọzọ.
Ọzọkwa, ojiji e jiri mkpụrụ okwu ahụ bụ "Linux" kesaa nkata adịla mbụ ma bụrụzi okwu a nabatara n'ozuzu ya.
Finalmente ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere ya Banyere ozi a, ị nwere ike ịlele nkọwa dị na blọọgụ mbụ nke Fedora onye ndu ọrụ Na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Na Fedora ha na-eme atụmatụ ime nkewa ma nyegharịa ya Fedora Linux
Facebook gosipụtara iko iko ya
Intel nwere nsogbu ọzọ, ha na-achọpụta ọnya data